Htar Ni Traditional Medicine - A Kyaw Pyay Say
Htar Ni Traditional Medicine
A Kyaw Pyay Say
A Sar Kyay Say
Mate Pyout Say
A Kyaw Pyay Laing Say (L)
A Kyaw Pyay Laing Say (S)
Shwe WaR Phoo A Kyaw Pyay Say
Shwe War Phoo Neurotonic Tablet
For the relief of muscle stiffness, numbness and ache, help improve vision and other neurological disorders, and help regulate bowel and relief constipation. Help detoxify the body and improve skin health.
ဤ ရွှေဝါဖူး အမှတ်တံဆိပ် အကြောပြေဆေးကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ထုံကျဉ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းသွားရာတွင် အားမရခြင်း၊ မျက်စိမှုန်ခြင်း၊ မျက်စိဝေခြင်း၊ ခေါင်းအုံဇက်လေးခြင်း တို့ကို သက်သာပျောက်ကင်း စေနိုင်ပါသည်။ သွေးသား မသန့်ရှင်း၍ ဖြစ်တတ်သော အသားအရေ ညိုညစ်ခြင်းတို့တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Product Name : Shwe War Phoo Neurotonic Tablet
Type : Myanmar Traditional Medicine
Dosage Form : Tablet (Box)
Traditional Medicine Registration Number : TMR 011143
Indication : For the relief of muscle stiffness, numbness and ache, help improve vision and other neurological disorders, and help regulate bowel and relief constipation. Help detoxify the body and improve skin health.
Note : Non-laxative, can be used daily.
Dosage : Adult -5capsules per day , Children (5-12 years) -3capsules per day, take with cold water everyday before bedtime.
Manufacturer : Htar Ni Traditional Medicine No. 32, Latha Street, Latha Township, Yangon, Myanmar. Tel : +95-1 8377914, 8370530, +95-9 885104551
တိုင်းရင်းဆေးဝါးအမည် - ရွှေဝါဖူး အမှတ်တံဆိပ် အကြောပြေဆေး
ဆေးဝါးပုံစံ - ဆေးပြား (ဘူး)
တိုင်းရင်းဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR 011143
သုံးစွဲနိုင်သောရောဂါများ - ခေါင်းအုံဇက်လေး၊ အကြောတက်ခြင်း၊ ထုံကျဉ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ မျက်စိမှုန်ခြင်း၊ အမြင်ဝေ၀ါးခြင်း၊ သွေးသားမသန့်သောရောဂါများနှင့်ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းသွားရအားမရခြင်းတို့တွင်အသုံး ပြုနိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက် - ဝမ်းနုတ်ဆေးမဟုတ်၍ နေ့စဉ်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
သုံးစွဲရန်ဆေးပမာဏ - လူကြီး တစ်ကြိမ် (၅) ပြား၊ ကလေး (အသက် ၅-၁၂နှစ်) တစ်ကြိမ် (၃) ပြား ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း ရေအေးဖြင့် နေ့စဉ်သောက်သုံးပါ။
ပင်ရင်း - ထာနီ တိုင်းရင်းဆေးဝါးလုပ်ငန်း အမှတ် (၃၂) လသာလမ်း၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း- ဝ၁ ၈၃၇၇၉၁၄၊ ၈၃၇၀၅၃၀၊ ၀၉ ၈၈၅၁၀၄၅၅၁
剂量：成人 - 每天5粒，儿童（5-12岁）- 每天3粒，每天睡前用温水服用。
生产商：塔尼传统医药企业 缅甸仰光市拉达镇拉达路门牌32号 电话：+ 95-1 8377914、8370530，+ 95-9 885104551
Copyright © 2020 Htar Ni Traditional Medicine. All rights reserved.